D CLUB အဖွဲ့ဝင်ပြီးထုတ်လုပ်မှု တွေကို ခံစားလိုက်!
ဤဝန်ဆောက်မှုထံမှ ဂိမ်း၊ အပ်ပလီကေးရှင်း နှင့် အခြားထုတ်လုပ်မှုများကို ဒေါင်းလုဒ် ပြုလုပ်ရန်အတွက် တစ်ပါတ်ကို ၄၅၀ ကျပ်ဖြင့် D CLUB အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ D CLUB! အဖွဲ့ ကိုဝင်လိုပါတယ်။
တစ်ပါတ်ကို ၃၁၅ ကျပ်ဖြင့် D CLUB အဖွဲ့ သို့ဝင်လိုပါသလား?